New Dalet Cube NG Powers Broadcast Graphics Workflows for Teleticino and IB3 | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner and Producer of NAB Show LIVE
AJA Gear သည် Freelance နည်းပညာဆိုင်ရာဒါရိုက်တာ Lutz Conneus ကို Client AV တောင်းဆိုချက်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကူညီပေးသည်
ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်။ အလားအလာရှိသောကျောင်းသားများနှင့် ၄ င်းတို့၏မိသားစုများအတွက် Open House ဖွင့်လှစ်
Sim Post New York၊ တိုရွန်တိုနှင့် LA တို့သည် Sundance Premieres များအတွက်သီးခြားလွတ်လပ်သောရုပ်ရှင်လေးခုကိုပြင်ဆင်ပါ
Olympusat ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Tom Mohler သည် PlayBox Neo Version 19 Channel-in-a-Box ကိုအဆင့်မြှင့်တင်လိုက်သည်
ဒေးဗစ်မောရစ်သည်အနောက်တိုင်းဒေသဆိုင်ရာအရောင်းမန်နေဂျာအဖြစ် FOR-A နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်
Dalet သည် Matthew, Carter ၏အရောင်းဌာနအကြီးအကဲများကိုခန့်အပ်ခြင်းဖြင့်စျေးကွက်မျိုးစုံတိုးချဲ့မှုကိုမြင်သည်။
“ Ford vs Ferrari” သည် DaVinci Resolve ကို အသုံးပြု၍ Nostalgic Film အတွက်ထူးခြားသောစတိုင်များဖန်တီးရန်အသုံးပြုသည်
Bluefish444 သည် ISON 2020 တွင် KRONOS တီထွင်သူဗွီဒီယိုကဒ်များနှင့် IngeSTore Live Recording ပစ္စည်းကိုသရုပ်ပြပါ
နိုင်ငံတကာတင်းနစ်အဖွဲ့ချုပ်မှပိုင်ဆိုင်မှု ၁၅၀၀၀ ၏မော်ကွန်းကိုစီမံရန် Imagen ကိုရွေးချယ်သည်
သတင်းခေါင်းစဉ်များပြုလုပ်ခြင်း - နယ်လှည့်သတင်းများစုဆောင်းခြင်းအတွက်ကွန်ရက်ဆက်သွယ်မှုကိုအားဖြည့်ရန် Switch နှင့် New TR မိတ်ဖက်
CBC သည် Make.TV နှင့်အတူ Celebrity Talk Show တွင်အလုပ်လုပ်သည်
Asustor America Inc. ၏အက်ပလီကေးရှင်းသုံးခုသည် Backups နှင့် Live Streams များကိုလွယ်ကူစေရန်ကူညီသည်
Cooke Optics ၏အသစ် Anamorphic / i Full Frame 85mm Macro ကို BSC Expo 2020 တွင်ပြသပါမည်
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Teletcino နှင့် IB3 အတွက်ပုံနှိပ်ခြင်းဆိုင်ရာဂရပ်ဖစ်လုပ်ငန်းအသွင်သစ် Dalet Cube NG ပါဝါ
ပရီမီယံဒစ်ဂျစ်တယ်ဂရပ်ဖစ်ဖြေရှင်းချက်သည်လျင်မြန်သောသတင်းထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဝေသည့်လုပ်ငန်းအသွားအလာအတွက်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုကိုအဆင့်မြင့်သည်။ Dalet Galaxy သုံးစွဲသူငါးယောက်အတွက်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်လွယ်ကူသည်
ပဲရစ်, ပြင်သစ် - နိုဝင်ဘာလ 19, 2019 - Daletရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်သူများနှင့်အကြောင်းအရာကျွမ်းကျင်သူများအတွက်အဖြေရှာခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းများအတွက် ဦး ဆောင်သူတစ် ဦး က Teleticino နှင့် IB3 သည်၎င်းတို့၏ထုတ်လွှင့်ဂရပ်ဖစ်စွမ်းရည်များကို Dalet Cube အသစ်ဖြင့်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံနေသည်ဟုယနေ့ကြေငြာခဲ့သည်။NG Brainstorm မှအချိန်နှင့်တပြေးညီဂရပ်ဖစ်အင်ဂျင်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောဖြေရှင်းချက်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအခြေစိုက်အီတလီဘာသာဖြင့်ထုတ်လွှင့်သောရုပ်မြင်သံကြားလိုင်း Telicicino သည် Ticino canton ဒေသအတွက်သတင်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ စပိန်နိုင်ငံရှိ Balearic ကျွန်းများ၏အများပြည်သူဆိုင်ရာရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်း IB3 သည်ဒေသခံကြည့်ရှုသူများ၏ရိုးရာထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ဒီဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းများကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။ သတင်းလုပ်ငန်းအသွားအလာအတွက် Dalet Galaxy ငါးခု၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော Dalet CubeNG Teleticino နှင့် IB3 ကိုအစဉ်အလာ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်လူမှုရေးလမ်းကြောင်းများရှိအမြင်အာရုံသတင်းများကိုအဆင့်မြင့်သောတက်ကြွသောအမှတ်တံဆိပ်ဖန်တီးနိုင်သည်။
ဒီဂျစ်တယ်လိုင်းများနှင့်ပရိသတ်များအကြားသတင်းစားသုံးမှုတိုးတက်လာမှုနှင့်အတူရုပ်ပုံများကြွယ်ဝသောသတင်းပုံပြင်များကိုစွဲလမ်းနေသောကြောင့်ထုတ်လွှင့်သူများအနေဖြင့်သတင်းမီဒီယာသမားများကိုသတင်းအဖြစ်အပျက်များတွင်ပါ ၀ င်မှုရှိ၊ ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ Jeremy Kerin, Dalet Cube မှတ်ချက်ပေးသည်NG ကုန်ပစ္စည်းမန်နေဂျာ Dalet ။ “ ဂရပ်ဖစ်ဖန်တီးမှုနှင့်ထုတ်လွှင့်မှုသည်ပုံပြင်ဗဟိုသတင်းလုပ်ငန်းအသွားအလာ Dalet Cube ၏ဗဟိုချက်ဖြစ်သည်NG ချောမွေ့စွာနိုင်ပါတယ် မာလ်တီမီဒီယာ တစ် ဦး သောထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံကို ကွမ်တမ် အရည်အသွေး၊ အင်္ဂါရပ်များနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အရ၎င်း၏ရှေ့မှောက်တွင်ရှေ့သို့ခုန်ပါ။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ Dalet Galaxy ဝယ်ယူသူငါးယောက်အတွက်ရနိုင်သည်။
ရှိပြီးသား Dalet Cube ဂရပ်ဖစ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်သော Dalet Cube ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းNG ဒီဇိုင်းပုံစံ ချ၍ အရွယ်အစားကြီးမားသည့်ဗိသုကာနှင့်ခေတ်မီသော web-based UI ပါ ၀ င်သည်။ ထည့်သွင်းထားသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Brainstorm အချိန်နှင့်တပြေးညီ 3D ဂရပ်ဖစ်အင်ဂျင်သည် 4K နှင့်အသုံးပြုသူသတ်မှတ်ထားသောရွေးချယ်စရာများအတွက်အထောက်အပံ့ဖြင့်လေကြောင်းနှင့်ဖိုင်အခြေပြုဂရပ်ဖစ်စွမ်းရည်ကိုတိုးချဲ့သည်။ နှင့်ထူးခြားသောအကူးအပြောင်းယုတ္တိဗေဒ။
မူလက Dalet Galaxy 5၊ Dalet Cube နှင့်ဆက်သွယ်သည်NG အပြုအမူများနှင့်အခြေအနေများကိုအဆင့်မြှင့်တင်မှုအတွက်အဆင့်မြင့်ပံ့ပိုးမှုဖြင့်ပြန်လည်ဖွင့်ခြင်းတွင်တိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲမှုများကိုပေးသည့်လျင်မြန်စွာသတင်းပေးနေသောလုပ်ငန်းအသွားအလာများကိုမောင်းနှင်သည်။ ၎င်း၏ရိုးရိုးအသုံးပြုရလွယ်ကူသောကိရိယာများနှင့်တင်းပလိတ်များသည်သတင်းခန်းမတွင်အလျင်အမြန်ကလေးမွေးစားခြင်းအားဖြင့်ရုပ်မြင်သံကြားများကိုရိုးရာနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်လိုင်းများအားလုံးတွင်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုရှိသောအမှတ်တံဆိပ်သတင်းအထုပ်များထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးနိုင်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ Dalet Galaxy ငါးမီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအလွှာသည်ဂရပ်ဖစ်အရာအားလုံးကိုခြေရာခံသည်နှင့်အမျှဂျာနယ်လစ်များအပါအ ၀ င် ၀ န်ထမ်းများသည်မည်သည့်ဂရပ်ဖစ်ဒြပ်စင်ကိုမဆိုရှာဖွေ။ ပစ္စည်းများကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်နှင့်ပြန်လည်နေရာချရန်လွယ်ကူစေသည်။ ကြံ့ခိုင်သော Dalet API သည်ဂရပ်ဖစ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပေးပို့နိုင်စွမ်းကိုတိုးချဲ့နိုင်သောတိုးချဲ့နိုင်သောလုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုခွင့်ပြုသည်။
Kerin သည်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ပေါင်းစည်းထားသောဂရပ်ဖစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိရန်လိုအပ်သည်ကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြသည်။ အယ်ဒီတာ့အာဘော်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာညှိနှိုင်းခြင်းအတွက် Dalet Galaxy5ကိုအားကိုးထားပြီးဖြစ်သော Teleticino ကဲ့သို့သောဖောက်သည်များသည်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းသည်အဆင်ပြေချောမွေ့စေသည့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုနားလည်သဘောပေါက်ကြသည်။ Dalet CubeNG multi-vendor ဂရပ်ဖစ်ပေါင်းစပ်မှု၏ချို့ယွင်းချက်များကိုဖယ်ရှားပြီး၊ သူတို့နှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိသည့် workflow မူဘောင်အတွင်းပရီမီယံဂရပ်ဖစ်ဒြပ်စင်များကိုအပြည့်အ ၀ ရယူသုံးစွဲနိုင်ရန်ကူညီပေးသည်။ ထို့အပြင်လက်ရှိသုံးစွဲသူတစ် ဦး အနေဖြင့်တယ်လီတီနို၏တိကျသောလိုအပ်ချက်များကိုသိရှိနားလည်ထားသည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသတင်းထုတ်ဝေသူများအတွက်အဖြေများနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာဒီဇိုင်းတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံများနှင့်ပေါင်းစပ်ထားပါသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံများဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသောသင်၏လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်သဘောပေါက်သောမိတ်ဖက်တစ် ဦး မှဒီဇိုင်းအပြည့်အဝပေါင်းစပ်ထားသောပရီမီယံဂရပ်ဖစ်ပေါင်းစပ်မှုသည်အကောင်းဆုံးဂရပ်ဖစ်လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုသေချာစေသည်။
Dalet Galaxy 5, Dalet Cube နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်NG ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ကျက်ခြင်းစိန်ခေါ်မှုများကိုဖယ်ရှားပြီးပိုင်ဆိုင်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချပေးသည့်တစ်ခုတည်းသောရောင်းချသူဖြေရှင်းနည်းကိုပေးထားသည်။
Dalet Cube အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအတွက်NG ကျေးဇူးပြု၍ အခြား Dalet ဖြေရှင်းချက်များ www.dalet.com/cube
အေျကာင္းအရာ Dalet ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာစနစ်များ
Dalet ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအပြည့်အဝပိုင်ဆိုင်မှုများ၏တန်ဖိုးအားပူးတွဲတင်ပြထားပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်ပိုမြန်သောအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေဖို့မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများ enable နှင့်။ တစ်ခုခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်အပေါ်အခြေခံပြီး, Dalet သတင်း, အားကစား, အစီအစဉ်ကိုပြင်ဆင်မှု, Post-ထုတ်လုပ်မှု, archives နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှု, ရေဒီယို, ပညာရေး, အစိုးရများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအဘို့အဆုံးမှအဆုံးသို့ Workflows အားပေးကြွယ်ဝသောပူးပေါင်း tools တွေကိုပေးထားပါတယ်။
Dalet ပလက်ဖောင်း၏အရွယ်မှာနှင့် modular ဖြစ်ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, လုပ်ငန်းအသွားအလာ orchestration, စားသုံးမိ, ပြုစု, တည်းဖြတ်, chat & အသိပေးချက်များ, transcoding, အလိုအလျောက်ထွက်ကစား, Multi-Platform ကိုဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် analytics အဖြစ် - သူတို့ကအကြီးစားမီဒီယာစစ်ဆင်ရေးမှသေးငယ်တဲ့ဝေဖန်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖြေရှင်းရန် key ကိုစွမ်းရည်နှင့်အတူပစ်မှတ်ထား applications များဆက်ကပ်။
ဇူလိုင်လ 2019 ခုနှစ်, Dalet အဆိုပါ Ooyala Flex ကိုမီဒီယာပလက်ဖောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ဝယ်ယူကြေညာခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီရဲ့မစ်ရှင်တစ်ခုအရှိန်, အပြောင်းအရွေ့ OTT & ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြန့်ဖြူးဘို့ကျယ်ပြန့်အခွင့်အလမ်းများကိုဖွင့်လှစ်, တည်ဆဲ Dalet နှင့် Ooyala ဖောက်သည်ကြီးမားတဲ့တန်ဖိုးကိုတတ်၏။
အများသုံးထုတ်လွှင့်သူများ (ဘီဘီစီ၊ စီဘီ၊ ပြင်သစ်တီဗီ၊ RAI၊ TV2 ဒိန်းမတ်၊ RFI၊ ရုရှား၊ ယနေ့မလေးရှား၊ မလေးရှား၊ SBS သြစတြေးလျ၊ ဗွီအိုအေ) အပါအဝင်ရာနှင့်ချီသောအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဖြန့်ချိသူများတွင် Dalet ဖြေရှင်းမှုနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုကြသည်။ အော်ပရေတာများ (Canal +, FOX, MBC Dubai, Mediacorp, Fox Sports Australia, Turner Asia, Mediaset, Orange, Charter Spectrum, Warner Bros, Sirius XM Radio)၊ အားကစားအသင်းများ (National Rugby League, FIVB, Bundesliga) နှင့်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ (ယူကေပါလီမန်) , နေတိုး၊ ကုလသမဂ္ဂ၊ စစ်ပြန်ရေးရာ၊ နာဆာ
Dalet အဆိုပါ NYSE-EURONEXT စတော့အိတ်ချိန်း (Eurolist ကို C) ​​တွင်ကုန်သွယ်ဖြစ်ပါတယ်: ISIN: FR0011026749 Bloomberg သတင်းဌာန DLT: လက်ဗွေ, ရိုက်တာသတင်းဌာန: DALE.PA.
Dalet®၏မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါသည် Dalet ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာစနစ်များ။ ဤနေရာတွင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အားလုံးသည်အခြားထုတ်ကုန်များနှင့်အမှတ်တံဆိပ်ဟာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များပိုင်။
Dalet, အလည်အပတ်ခရီးအပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက www.dalet.com.
Dalet သည် Matthew, Carter ၏အရောင်းဌာနအကြီးအကဲများကိုခန့်အပ်ခြင်းဖြင့်စျေးကွက်မျိုးစုံတိုးချဲ့မှုကိုမြင်သည်။ - ဇန်နဝါရီလ 22, 2020
“ Ford vs Ferrari” သည် DaVinci Resolve ကို အသုံးပြု၍ Nostalgic Film အတွက်ထူးခြားသောစတိုင်များဖန်တီးရန်အသုံးပြုသည် - ဇန်နဝါရီလ 22, 2020
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ CES2017 ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ပေါင်းစည်းမှု MStar Ooyala OTT SJGolden - SoftAtHome လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် virtual reality	2019-11-19
ယခင်: Abner Figuereo သည် VP Business Development အဖြစ် LYNX Technik Inc ကိုဆက်သွယ်ခဲ့သည်
နောက်တစ်ခု: Spring Internship, Digital Photo & Video Editing- နယူးယောက်
KCVM-FM မှ NAB ပြပွဲတွင် NAB Crystal Heritage Award ရရှိမည်
Chris Cornelius၊ ဘင်ဒေါင်းစ်ကို NABPAC တွဲဖက်ဥက္ကairs္ဌအဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည်
လေယာဉ်အမှုထမ်းခေါ်ဆိုမှု - စီးရီး
သင်္ဘောသားခေါ်ရန် - Feature ကို